မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် (MTU) သည် မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ် (MIT) အဖြစ် လူသိများခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၌ တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များထဲမှ ထင်ရှားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်မှ အထက်မြန်မာပြည် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရနှင့် ဘွဲ့လွန် ကျောင်းသားများအတွက် အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာရပ် အသီးသီးအား သင်ကြားမှုပုံစံ အမျိုးမျိုး ချမှတ် သင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိသည်။ တက္ကသိုလ်မှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်တန်းအပတ်စဉ် တစ်ခုစီအတွက် ကျောင်းသား ၃၀၀ ခန့် လက်ခံသင်ကြားပေးနေသည်။
နိုင်ငံတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာနယ်ပယ်၌ လုံးလုံးလျားလျား အခြေခံသည် ဆိုသည်အား သိရှိထားသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံအဆင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ် သင်ကြားရေးဌာနများအား နိုင်ငံ၏အကျိုးအတွက် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (ယခု စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန)၊ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းအမှတ်(၂)မှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်အဖြစ် ၁၉၉၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ် (Mandalay Institute of Technology) အစား မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် (Mandalay Technological University) ဟုအမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
↑ "Mandalay Tech University Relocates Ph.D. Scholars"၊ Mizzima News၊ 2008-03-20။2February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 September 2010။
↑ MTU. "ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများ". Ministry of Science and Technology. Retrieved on 2014-10-20. [လင့်ခ်သေ]
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Sayne Le Shwe (2004). "Technology and State Development". Ministry of Science and Technology. Retrieved on 2008-09-13. Archived 10 June 2011 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 10 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mandalay Technological University"၊ MTU၊ 2009။2February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5October 2011။
↑ "Mandalay Technological University"၊ MTU၊ 2009။2February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 August 2011။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်&oldid=704723" မှ ရယူရန်